नेपाली चलचित्र देवयानीको प्रिमियर शो बारे निर्देशकसंग अन्तरवार्ता
नेपाल यङ स्टार ग्रुप र काभ्रे सम्पर्क समितिको संयुक्त आयोजनामा आउंदो अप्रील १० मा दक्षिण कोरियामा प्रिमियर शो गर्ने तयारीमा रहेको नयाँ नेपाली चलचित्र देवयानीका निर्देशक विजय बस्नेतसँग पत्रकार रघु त्रिपाठीले लिनुभएको अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
भाषा नेपाली तर मसला बलिउड भनेर आरोप लाग्ने नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा बेलाबेलामा राम्रा र नयाँ किसिमका चलिचित्रहरु पनि बन्ने गरेका छन् । यसै क्रममा सहिद फिल्म प्रालिको ब्यानरमा देवयानी नामक नयाँ किसिमको चलचित्र बनेको छ । नेपाली नयाँ वर्ष २०६८ को अवशरमा नेपाल यङ्ग स्टार ग्रुप र काभ्रे सम्पर्क समितिको संयुक्त आयोजनामा दक्षिण कोरियामा प्रिमियर शो गर्न लागेको यस चलचित्रका निर्देशक विजय वस्नेत हुन् । नायकद्वय निखिल उप्रेती र दिलिप रायमाझी अनि नायिका तृप्ति नाडकरको साथमा नयाँ नायिका विमला केसीको वेजोड अभिनय तथा कृष्णहरि बरालको गीत र लक्ष्मण शेषको सङ्गीत रहेको यस चलचित्रमा नृत्य निर्देशन वसन्त श्रेष्ठले गरेका छन् भने वरिष्ठ छायाँकार राजु थापाले यसको छायाङ्कन गरेका छन् । रोशन श्रेष्ठको द्वन्द्व निर्देशन रहेको यस चलचित्रका कति दृश्यहरु त एनिमेसन समेत गरिएका छन् । नायिका विमला केसीको कथामा आधारित भएर पटकथा लेख्ने काम निर्देशक स्वयम्ले गरेका छन् ।
देवयानी खुब चर्चामा छ कस्तो खालको चलचित्र हो यो ?
यो असाध्यै महत्वाकाङ्क्षी चलचित्र हो । पटकथा तयार पार्न मात्र दुई वर्ष तीन महिना लागेको थियो । यस चलचित्रमार्फत समाज परिवर्तनको गतिलाई समात्न खोजेको छु । विचार प्रविधि र कलाका हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भन्न सकिने यो चलचित्र खासमा मौलिक नेपाली चलचित्र हो ।
चलचित्रको विषय वस्तुको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न ?
देवयानी चलचित्र नारीवाद राष्ट्रियता र उदात्त प्रेमको त्रिवेणी हो । यो चलचित्र पितृसत्तात्मक समाजमा हुर्किएकी नेपालकी आधुनिक युवतीका स्वप्नील आकाङ्क्षाहरुको कथा हो । एकातिर यो नारी मनोविज्ञान हो भने अर्कातिर लैङ्गिक समताको आवाज पनि हो । सामाजिक रुपान्तरण र राष्ट्रियताको अपनत्वलाई एकै साथ उतार्नको लागि कसिलो कसिलो तर्कपूर्ण र कलात्मक पटकथाको प्रयोग गरेको छु । देशको माटो र आत्मसम्मानलाई गौरवका साथ प्रस्तुत गरेको छु । व्यक्ति प्रेम जति महान् छ त्यसभन्दा पनि उदात्त र गहिरो प्रेमका रुपमा देश प्रेमलाई चिनाउने प्रयास गरेको छु । जहाँसुकै बस्ने नेपाली मन अन्ततः नेपाली हो र यस चलचित्रमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले परिवर्तन हुँदै गरेको नेपाली समाजको सुन्दर चित्र देख्न पाउनु हुनेछ ।
त्यसो भए चलचित्र गम्भीर विषय भएको आदर्शवादी छ ?
देवयानीमा देवयानी गहिरा जिज्ञासा र गम्भीर संवेदनाले भरिपूर्ण त छ नै रोमान्स र मनोराजन पनि उत्तिकै पाउन सक्नु हुन्छ । नारीवादीहरुका लागि राष्ट्रवादीहरुका लागि नायाँ सोच राख्ने नयाँ पुस्ताका जुझारु युवा युवतीका लागि । उपदेश दिने रहर गरेको होइन तर परिवर्तनका कुरा गर्ने सचेत नेपालीहरुका लागि गहिरा प्रश्नहरु छाड्न खोजोको छु ।
नेपालीहरुले देवयानी भन्ना साथै कुख्यात राजदवार हत्या काण्डमा सम्बन्धित भएर आउने देवायानीलाई बुभुछन उनैको कथा होला । होइन त ?
कुनै पनि सिर्जनामा समाज र समयको छाप रहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मैले यस चलचित्रमा आजको युगलाई देखाउने प्रयास गरेको छु । त्यसो हुँदा देवयानी मात्रै होइन धेरैको कथा तपाईंले यसमा पाउन सक्नु हुन्छ ।
र अन्तमा पि्रमियम शोनै देश बाहिर बाट सुरु गर्न लाग्नु भएछ नि ?
हो । यसको कारणबारे म पाँचवटा बुँदाहरु दिन चाहन्छु ।
· नेपाली चलचित्रको अन्तराष्ट्रियकरण गर्न
· विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मातृभूमिको तिस्रना मेटाउन
· नेपाली राष्ट्रिय चलचित्र उद्योग तथा निर्मातालाई स्थापित गराउन
· प्रवासका नेपाली संघ संस्थाहरुको आर्थिक सुदृढीकरणमा सानै भए पनि टेवा दिन
· प्रवासी नेपालीहरुलाई राम्रा नेपाली चलचित्र हेर्ने अवसर प्रदान गर्न ।